Nisy nisambotra ny sefom-pokontaninay sy fanonganam-panjakana tohiny!
2009-03-14 @ 10:50 in Politika
Tamin'ny marainan'ny androany sabotsy 14 marsa 2009 dia nisy olona nanambara tamiko fa nisy zatovolahy izany teto amin'ny fokontany 67ha avaratra andrefana nitondra ireo miaramila tsy manao beret nanondrotondro trano vitsivitsy maromaro azy ireo, ny nahavariana dia tranon'ny mpikambana TIM avokoa ireo notondroin'ilay zatovolahy ireo. Tsy noraisiko ho zavatra matotra io filazana io, na noheveriko hoe mety tsy ho lasa lavitra. Kanjo renay amin'izao fotoana izao, niantso ny vadiny ny marimarina kokoa, fa nisy naka tsy misy fanazavana tao an-tranony ny filoham-pokontaninay ary tsy fantatra izay misy azy amin'izao fotoana izao. Teo aho vao vaka... Raikitra ve ny fisamborana izay TIM fantatra rehetra eto amin'ny tanàna? Tsy maintsy manoratra izao aho ho fampahalalàna anareo. Inona no anton'izao fisamborana izao? Be moa no niteny fa misy kakay matoa misy izao toe-javatra izao. Fa raha misy moa ny fisamborana ny TIM rehetra dia mivandravandra fa tsy hampihatra izany demaokrasia izany velively ny tariky ny TGV sy ny ao ambadikany izay toa firenena nifankazatra loatra tamin'ny Malagasy.
Aza mihevitra ianareo fa raha tsy manoratra i jentilisa dia leo politika izy izay! tsia dia tsia tokoa! Manara-baovao tsara izy nefa tsy te-hiditra anatin'ny tsaho isan-karazany. Na izany aza dia tsara ny mampahafantatra ny vaovao izay mahavariana fa tsy mba lazain'ny gazety ary toa tsy hita aty amin'ny aterineto koa aza, na andeha mody atao hoe mbola tsy naharaka ny famoaham-baovaon'ny sasany aho. Nosomparan'ny mpanohana ny TGV indray manko ny tandrom-pandefasana sary sy feo sy ny kojakoja miaraka aminy ao amin'ny RNM sy ny TVM eny Ambohimihitsimbina. Raha nanontany havana tany ivelan'Antananarivo aho dia novalian'izy ireo fa mahita TVM ry zareo saingy ny feo no ratsy dia ratsy. Efa io famotehana ny sary sy feo hielezan'ny tsaho manerana an'i Madagasikara io no nokendren'ny TGV tamin'ny fandorana ny RNM sy ny TVM Anosy, saingy tsy nahomby moa izany tetika izany. Natao indray izany ny fanimbana fanananam-panjakana teny Ambohimitsimbina omaly Zoma 13 marsa 2009, mba tsy handrenesan'ny vahoaka intsony ny feo avy eny Iavoloha ka ny fitondrana an-dalambe naverin'ny miaramilan'ny Capsat hivory eny an-kianjan'ny 13 mey ihany no ho re!
Mba mahafantatra ihany ny tena fa eny Ivato (ao amin'ny RDB ) no misy ny ankamaroan'ny fitaovan'ny radio Antsiva sy ny radio tele VIVA saingy moa ilaina ve ny misotasota ireo haino aman-jery telo karazana ireo, sady mampisy olana amin'ny katolika indray izany. Miaramila miambina ireo fitaovana ireo moa no niteny izany tamin'ny tena ka aza atao mahagaga anao loatra, izany no izy rehefa be resaka eny am-pisotroana toaka eny akaiky eny e! Fa hadalan'ny mpanohana an-dRavalomanana sady itsiniako azy mihitsy ny fikasana nataon'ny sasany handoro ny Tvplus tezitra taorian'ny nanafihan'ny miaramilan'ny Capsat ny mpanohana an-dRavalomanana teny Anosy niambina ny minisitera iny, lasa manaraka ny fomba ratsy ataon'ny sasany indray ve? Hita mihitsy fa mbola tsy zakan'ny Malagasy amin'ny ankapobeny izany hoe demaokrasia izany raha ny tena marina fa resaka fotsiny ka atao. Mbola tsy ao anatin'ny kolontsaina malagasy io matoa misy ireny fandoroana ny tranon'ny tsy mitovy hevitra amin'ny tena ireny ihany koa tahaka ny nandrobana sy ny nandorana ny tranon'ny PDS Guy Rivo Randrianarison sy ny nandrobana ny tranon'ny depiote Mamy Rakotoarivelo iny.
Hitantsika tsara fa saiky isan'andro dia misy hatrany ny hetsika nataon'ny miaramila handrobahana ny fahefana. Ny andro voalohany iny efa nolazaiko iny. Ny andro faharoa azo lazaina fa nitovitovy tamin'ny natao tany amin'ny minisiteran'ny fiarovana ihany no natao teny amin'ny Etamazaoro Andohalo, saingy tsy noterena hilaza teo anoloan'ny mpanao gazety ny fametraham-pialany intsony ny lehiben'ny etamazaoro teo aloha. Tonga indray ny andro fahatelo, dia ny teny amin'ny lapan'ny praiminisitra avy hatrany no nandehanan'ny praiminisitra tetezamita niaraka tamin'ny miaramilan'ny Capsat, natao endrika fitsidihana sy fihaonana teo amin'ny praminisitra roa tonta moa io fa efa mazava ny hafatra tiana ampitaina tao ambadik'izany fihetsika izany. Hafa mihitsy ny Malagasy rehefa manongam-panjakana an! mampiseho fotsiny hoe azy ny hery dia mazava amin'ny andaniny ny filazana. Andro fahaefatra, efa nakarina teto Antananarivo ny fiara mifono vy, saingy nandeha dia nandeha ny fanentanana hiarovana ny lapan'Iavoloha... ary nisy ireo nirodorodo teny, tsy nisy loatra ny nampiseho sary ireo olona ireo, nefa indrisy na izaho ihany koa aza tsy afaka mankeny noho ny fotoana tsy mifametra hahitana izay hamaroana na havitsian'ny olona eny. Niezaka ny nandà ny filazana fanafihana ny lehiben'ny etamazaoro "vaovao" saingy hita amin'ny resaka nataony fa nisy tokoa ny manam-boninahitra efa niomana ho amin'izany fanafihana izany. Nisy ny nanao fanambarana fa entina hanakanana ny fihavian'ny "mpikarama an'ady" no nampakarana ireo fiara mifono vy ireo, nefa na ny lehiben'ny etamazaoro "vaovao" aza milaza fa tsy mahalala vaovao momba izany, fa tsaho fotsiny izany, araka ny nambarany.
Rehefa dinihina ny fihetsik'ireto miaramila ireto, dia miandry olon-kafa hitondra ny firenena izy, fa tsy ny "filohan'ny fahefana avon'ny tetezamita" loatra no heveriny hitantana vonjimaika ny firenena. Efa manahy aza aho fa mitovy amin'ny ataon'ny polisim-pirenena amin'izao fotoana izao nametraka ny manana grady ambony indrindra dia ny Jeneraly Jacky Rahaingo (kintana efatra) ho filohan'ny komity hiaingan'ny baiko no tetik'ireto miaramila ireto ihany koa... ary raha miteny izany manana ny grady ambony indrindra moa dia izay manana ny grady Amiraly no ao an-tsaina voalohany... saingy ny an'ny polisy moa mbola amperinasa io lazaina fa manana ny grady ambony indrindra io. Eritreritra ny ahy fa tsy milaza aho hoe izay no marina.
Fa inona no mahatonga an-dRavalomanana tsy manaiky hiala, araka ny fitakian'ny miaramila sy ny mpanohitra nefa tsy manana hery hiaro azy intsony izy e? Tetika manko ny an'ny miaramila, fa azo atao hoe mifanaraka amin'ny lalampanorenana ny fialana tsy ho filoha ankoatra ny fampiatoana mipetraka eny amin'ny Fitsarana avon'ny Lalampanorenena izay sarotra tanterahina sy ny fahafatesana ( ao anatin'ity ve ny famonoana ny filoha?). Raha mametra-pialana manko araka ny hevitro ny filoha dia "tsy manana zo" intsony hirotsaka hofidiana intsony rehefa avy eo. Dia mihazohazo ny toe-draharaha na azo lazaina ho tsy manana hery intsony aza ny filoha ankehitriny. Ao anatin'ny lalampanorenena moa fa ny filohan'ny Antenimierandoholona no misolo ny filoha... koa izay angamba ny antony nametrahan'ny praiminisitra an-dalambe tohanan'ny miaramila 'mpioko', taratasy fampiatoana ny filoham-pirenena sy ny antenimiera roa tonta teny amin'ny lapan'i Mahazoarivo androany Sabotsy maraina teo.
jentilisa, 14 marsa 2009 amin'ny 12:50